Affiliate Links များထည့်နည်းနှင့် ကမ်ပိန်းများစတင်ရန် - Red Emperor Collective
Affiliate Links များထည့်နည်းနှင့် ကမ်ပိန်းများစတင်ရန်
သင်၏ပထမဆုံး CBD နှင့် Delta 8 THC ကမ်ပိန်းကို စတင်နည်း
မတူညီသော ထုတ်ကုန်များကို သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့် မိသားစုထံ ကြော်ငြာရန် မတူညီသော ကမ်ပိန်းများကို သင်ဖွင့်နိုင်သည်။
ဒါကတော့ CBD Skin Care Products အတွက် ကမ်ပိန်းတစ်ခုဖန်တီးနည်း ဥပမာတစ်ခုပါ။
1၊ CBD Skin Care Products စာမျက်နှာသို့ သွား၍ လင့်ခ်ကို ကူးယူပါ။
2. လင့်ခ်ကို ကော်ပီကူးပါ။
3. Affiliate Welcome Page Link ကို နှိပ်ပါ။
4. CBD အရေပြားစောင့်ရှောက်မှုလင့်ခ်ကို စာမျက်နှာ URL အကွက်ထဲသို့ ကူးယူပါ။
5. သင့်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအမည်ကို ပေးပါ။
6 generate URL ကို နှိပ်ပါ။
7. သင့်လင့်ခ်အသစ်သည် ဤပုံနှင့်တူနေသင့်သည်။ https://redemperorcbd.com/product-category/cbd-products/cbd-skin-care/?ref=1&campaign=CBDSkinCare
၈။ သင်၏လင့်ခ်အသစ်ကို Facebook၊ twitter၊ Instagram၊ အီးမေးလ်၊ စသည်တို့တွင် တင်ပါ၊ ၎င်းနှင့်ဆင်တူသောအရာကို သင်တွေ့ရပါမည်။
သင်သည် ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုံး၊ အမျိုးအစားတစ်ခု သို့မဟုတ် သီးခြားထုတ်ကုန်တစ်ခုအတွက် လှုံ့ဆော်မှုများကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ အထိရောက်ဆုံး ကမ်ပိန်းများသည် ထုတ်ကုန်ကို သင်ကိုယ်တိုင် နမူနာယူပြီး သူငယ်ချင်းများနှင့် မိသားစုဝင်များနှင့် မျှဝေသည့် YouTube ဗီဒီယိုများဖြစ်သည်။ သင့်သူငယ်ချင်းတွေကို အသိပေးရမယ့် နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ စုစည်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး သူတို့သူငယ်ချင်းတွေကို ညွှန်းပေးခြင်းဖြင့်လည်း ငွေရှာနိုင်ပါတယ်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါက salee@redemperorcbd.com သို့ အခမဲ့ အီးမေးလ်ပို့ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ နောက်ဆုံးရ ဘလော့များကို ရှာဖွေပါ။
မေလ 30, 2022
Terpene စျေးကွက် 2022
မေလ 22, 2022
အေးဂျင့် Freak Nasty အပတ်စဉ် Intel အစီရင်ခံစာ Pincer လှုပ်ရှားမှု
CBD သည် Covid-19 ဆဲလ်ကူးစက်မှုကိုတားဆီးရန်နှင့်ဗိုင်းရပ်စ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပြန်လှန်နိုင်စွမ်းပြသသည်။
Effect & Terpenes အား ဆွဲဆောင်ခြင်း။
မတ်လ 26, 2022